Ahịa ahịa na Social Media | Martech Zone
N'ime nkwekọrịta mgbasa ozi anyị, ihe kacha mkpa anyị na ụlọ ọrụ ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ bụ iji hụ na azụmaahịa ha kwadebere maka itinye atụmanya na ndị ahịa n'ịntanetị. Ezie na ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịhụ na-elekọta mmadụ media dị ka a nwere ahịa ohere, ha adịghị aghọta na ndị mmadụ online adịghị eche ihe nzube ha bụ… ha na-eche nanị na e nwere ohere ịgwa ụlọ ọrụ. Nke a meghere ụzọ maka ịmekọrịta nsogbu ndị ahịa na anya ọha na eze… na ụlọ ọrụ kwesịrị ịmata ọnyà na ohere.
a infographic Dịka ọmụmaatụ, na-akọwapụta akụkọ siri ike, ndị ahịa ndị na ụlọ ọrụ na-emekọrịta ihe site na mgbasa ozi mmekọrịta na 20% -40% karịa ndị ụlọ ọrụ ahụ. Yabụ, kedu ka esi eji mgbasa ozi mmekọrịta gị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa gị.
Dozie esemokwu nke onye ahịa na-enwe site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ị ga-ahụ na ọ bụ otu ọwa ahịa ahịa kachasị mma ị rụtụrụla. Hapụ ha ka ha kwụ ọtọ, ị ga-ahụta na nke ahụ abụghị eziokwu.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaServiceelekọta mmadụ media